च्याउ सेवन नै स्वच्छ जिवनको आधार हो : सुरेन्द्र गिरी::mirmireonline.com
च्याउ सेवन नै स्वच्छ जिवनको आधार हो : सुरेन्द्र गिरी
च्याउको स्वाद र सन्तुष्टीले मासुका स्वादलाई पनि बिर्साउन सक्छ भन्ने भनाई आम उपभोक्ताबाट आउन थालेको छ । च्याउको माग वढ्दै जानु र माग र आपुर्तिको सन्तुलन सुचारु नभएको अवस्था अहिले छ भने यसमा संलग्न कृषकहरु आफ्नो उत्पादनलाई बढाउन प्रयत्नरत छन् ।
हरेक गाँउ–गाँउमा च्याउको उत्पादन गरी कमसेकम घरको लागि मात्र भए पनि तरकारीको रुपमा उपभोग गर्न सके कुपोषणवाट सामान्यतयाः बच्न सकिन्छ भने यसको व्यवसायिक खेती गर्न सके मनग्य लाभ पनि लिन सकिन्छ ।
हामीले च्याउमा २३ बर्षदेखि संलग्न रही यसकै प्रवद्र्धनमा सक्रिय, च्याउ उत्पादक संघ नेपालका केन्द्रिय बरीष्ठ उपाध्यक्ष तथा एग्रो इन मसरुम का प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गिरीसँग हामीले केहि जानकारी लिने प्रयास छौँ । प्रस्तुत छ सोहि कुराकानी :-
च्याउ उत्पादक कृषकहरुको उत्पादन गरेको च्याउले बजार पाइरहेको छ त ?
हलसम्म च्याउ जति उत्पादन भएको छ बजार पनि राम्रोसँग नै पाएको मान्न सकिन्छ । यसमा कमाई पनि प्रशस्त रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा हामी किन च्याउ खेती नगर्ने तथा आफ्नो कृषि व्यवसायवाट किन आत्म निर्भर हुन नसक्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगारी छाडेर आएका व्यक्तिहरु हुन वा परम्परागत कृषि व्यवसायमा आश्रित कृषकहरु हुन जसले यो च्याउ खेतीलाई अवलम्वन गरेका छन उनीहरुले प्रशस्तै कमाई गर्न थालेका छन भने स्वरोजगार हुन सकेका पनि छन् भन्ने प्रकृतिका खबरहरु पत्र पत्रिकामा आइरहनुले पनि हाम्रो ध्यान च्याउ खेती प्रति आकर्षित हुन जरुरी छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार पनि वढ्ने कमाई पनि बढ्ने जीवनस्तर पनि सुधार भएको पाएको छु ।
सामान्यतया उत्पादन भएको च्याउले बजार त पाएको भन्नुभो, तर बढी उत्पादन भएको समयमा मुल्य चाँहि एकदमै कम पाँइन्छ भन्ने कृषकहरु पनि छन् त ?
हो बजार त पाएको नै छ । बढी उत्पादन हुने सिजनमा मुल्य अलि घट्छ तर बजार भने पाइरहेको छ । सामान्यतयाः आफ्नो परम्परागत खेतीलाई पनि छाड्नु नपर्ने हँुदा यो व्यवसाय प्रति सबैको आकर्षण बढ्न थालेको छ । विभिन्न प्रकारका च्याउहरुको उत्पादन तथा वजार अलग अलग रहेको भएता पनि हाम्रो हावापानी र जमिनमा सम्भव हुने प्रकृतिका च्याउको उत्पादन बढाउन प्राविधिक रुपवाट सो सम्वन्धी सम्पुर्ण सीप सिक्न जरुरी भैसकेको छ ।
यो समयमा नेपालमा बार्षिक रुपमा यति च्याउ उत्पादन भइरहेको छ भन्न सकिन्छ ?
च्याउ लाई अहिले मासु भन्दा सस्तो र स्वास्थ्यवद्र्धक मानेर धेरैले खान थालेका छन् र यो संख्या दिनुदिन वढीरहेको छ । भोज भतेर पिकनिक तथा आफन्तजन भेटघाटमा च्याउको परिकार वन्न थालेको देखिन्छ । शुरुका वर्षहरुमा अर्थात २०३९ सालमा नेपालमा वार्षिक १२ टन उत्पादन हुने च्याउ हाल यसको उत्पादन बढेर को वार्षिक ८ सय ५० टन उत्पादन हन थालेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर यो तथ्याङक भन्दा १५ प्रतिशतले बढी उत्पादन भइरहेको मान्न सकिन्छ ।
यति सम्भावना रहेको च्याउ क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीहरु के–के छन् त ?
जहाँ सम्भावना त्यँहा समस्या र चुनौती त हुन्छ नै । च्याउ क्षेत्रमा खास समस्या भन्दा कच्चा पदार्थको भाउ बढीरहने समस्या प्रमुख समस्या हो । यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्दा कृषकहरुले च्याउ बजारमा पु¥याउदा ट्राफिक प्रहरीबाटै शोषित बन्नु परेको अवस्था छ । किसानले मोटरसाइकलमा च्याउ बोकेर गन्तव्यमा पुग्न नपाँउदै ट्राफिक प्रहरीले चिट काटिदिन्छन् । यो समस्या एकदमै भयाबह अवस्था छ । च्याउ छिटो बिग्रने भएकोले समयमा बजार पुर्याउन सकिएन भने बिग्रने हुनाले पनि समयमा बजारमा भने लगि हाल्नुपर्छ ।
च्याउ सेवन नै स्वच्छ जिवनको आधार हो, यसपालिको दशैँ च्याउ खाएर मनाऔँ भन्न चाहन्छु ।